चिन्तित भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यी ३ तरिका अपनाएर तत्कालै हुनुहोस् चिन्तामुक्त ! - VOICE OF NEPAL
१ पुष २०७६, मंगलवार ००:२३
350 ??? ???????
भनिन्छ, ‘चिन्ताले चिताको बाटो देखाउँछ ।’ त्यसैले अनावश्यक चिन्ता कसैका लागि पनि फाईदाजनक छैन । कुनै पनि चिन्ताबाट मुक्त हुनका लागि छिट्टै नै सम्हालिनु आवश्यक छ । आज हामीले यस्ता तीन उपायको बारेमा जानकारी दिँदैछौ‌ंँ, जसबाट तपाईं तत्कालै केही राहत महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ।
१. कुनै पनि चिन्ताले अचानक हमला गर्छ भने त्यसलाई तत्कालै मानसिक रुपमा सुल्झाउने प्रयास थाल्नुस् । समस्याको समाधान खोज्ने समय तय गर्नुस् । त्यो कस्तो चिन्ता हो टिपोट गर्नुस् र समयमै समाधानबारे सोच्नुस् । यति गर्दा तपाईंको ध्यान चिन्ताबाट केही पर गईसक्छ । तपाईंले तत्कालै केही राहत महसुस गर्नुहुन्छ ।
२. राम्रो होस् वा नराम्रो कुनै पनि स्थिति लामो समयसम्म टिक्दैन । चिन्ताको कारण पनि लामो समय रहनेछैन । मात्रै यत्ति सोच्नु भयो भने पनि तपाईं केही हदसम्म चिन्ता मुक्त हुनुहुनेछ । यो खराब समय छिट्टै हट्ने छ भनेर सकारात्मक सोच्न थाल्नुस् । चिन्ता मानिस आफैंले बढाईरहेका हुन्छन् ।
३. धेरै नै ठूलो चिन्ता हो र यसले तपाईंलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ भने, एकान्तमा जानुस् । दुबै हात फैलाउनुस् आफूलाई आकाशप्रति समर्पित गरेको सोच्नुस् । यो समर्पणले तपाईंलाई तत्कालै सम्हालिन मद्दत पुर्याउँछ । तपाईंले तत्कालै चिन्ता मुक्त भएको महसुस् गर्नसक्नु हुन्छ ।
यी त तत्कालीन उपाय हुन् । दीर्घकालीन रुपमा चिन्ता हटाउन भने त्यसको कारण पत्ता लगाएर निधान नै गर्नुपर्छ । चिन्तालाई धेरै लिइराख्नु हुँदैन । यसै विषयमामात्रै सोचिराख्नुभयो भने तपाईं भित्रभित्रै कमजोर हुन थाल्नु हुनेछ ।